စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်: September 2011
အိပ်မက်အကြောင်း Feeling 27
ကျမတို့ မက်ခဲ့သော အိပ်မက်တွေသည် ဘဝတွေနဲ့ အလဲအထပ်လုပ်ပီးမှသာ မက်ခွင့်ရခဲ့သည်။ အိပ်မက်တစ်ခုကို မက်ခွင့်ရဖို့ဆိုသည်မှာ အိပ်မက်တွေကို နှလုံးသားထဲထည့်ပြီး လက်ထဲမှာ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သမျှအရာတွေကို စုစည်း ဆုပ်ကိုင်ရင်း အနာဂတ်တွေကို ကံကြမ္မာနဲ့ လောင်းကြေးထပ်ခဲ့ကြရခြင်း ဖြစ်သည်.
အိပ်မက်တွေသည် မက်ခွင့်ရသည့်အချိန်မှာသာ လှပသလောက် အကောင်အထည်ဖော်နေရသည့် အချိန်တွင် နာကျင်စဖွယ် ကောင်းလှသည်. ပေးဆပ်ခဲ့ရသည်.. ရယူခဲ့ရသည့် အချိန်တွေလဲ ရှိသည်.. ဆုပ်ကိုင်ထားသမျှကို လက်လွတ်ခဲ့ရသည်.. လိုအပ်နေသေးသည့် အရာတွေကိုလဲ ထပ်ရခဲ့သည်.. အိပ်မက်တွေ ပြောင်းမက်ခဲ့ရသည်လည်း ရှိခဲ့သလို ဘဝတွေ ပြောင်းလဲသွားသည့်အချိန်တွေလဲ ကြုံခဲ့သည်.. ပြောင်းလဲဖို့အတွက် အချိန်သည် ခဏတာသာ ဖြစ်သည်.
အချိန်ခဏလး ပြောင်းလဲဖို့အတွက် အရင်းအနှီးတွေ တပုံကြီး ပေးဆပ်ခဲ့ရသည်.. မျှော်လင့်ချက်တွေ တသီကြီး ချခင်းခဲ့ရသည်.. စိတ်ကူးတွေ တစ်လှေကြီး တွေးတောခဲ့ရသည်.. သို့ပေမဲ့ ပြောင်းလဲသွား သည့် အချိန်သည် ခနတာသာဖြစ်သည်. အချိုးအကွေ့ အလှည့်အပြောင်း ဒါတွေသည် မြန်ဆန် သွက်လက်လှသည်..
အချိုးအကွေ့ မြန်သလို အလှည့်အပြောင်းလဲ မြန်လှသည်.. ဘဝ၏ အဆစ်အချိုးတွေတိုင်းတွင် ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ခွင့်တွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတာတွေ ရှိနေသလို သူတစ်ပါးက ချခင်းပေးထားသည့် လမ်းတွေမှာ လျှောက်နင်းခဲ့ရသည် အချိန်တွေလဲ ရှိခဲ့သည်.. မျှော်လင့်သည့်အတိုင်း ဖြစ်မလာသော အိပ်မက်တွေနှင့် မျှော်လင့်ချက်တွေထက် ပိုမိုသာလွန်သည့် အိပ်မက်တွေကိုလဲ မက်ခွင့်ကြုံခဲ့နိုင်သည်..
တချို့အိပ်မက်တွေသည် မက်နေရင်းနှင့် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ဖူးသည်.. တချို့အိပ်မက်တွေသည် မက်ခွင့်ကြုံနေသည့် အချိန်တွင်ပင် လုံ့လစိုက်ထုတ်စရာမလိုဘဲကို အလိုလိုပြီးပြည့်စုံခဲ့သည်လည်း ရှိသည်.. တချို့ တချို့လူတွေအတွက်ကျတော့ အိပ်မက် မက်နိုင်ခွင့်တောင် မရှိပေမဲ့ တချို့ တချို့ လူတွေအတွက်ကတော့ အိပ်မက်တွေကို လိုသလောက် အထပ်ထပ် မက်ခွင့်ရခဲ့သလို မက်နိုင်ခွင့်တွေလဲ တစ်ပုံတစ်ပင် ရခဲ့ကြသည်.
အိပ်မက်မက်နေသည့်အဆုံးနှင့် အိပ်မက်မက်ခွင့်ရနေသည့်အချိန်တွင်တော့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်စက်ခွင့်ရလိမ့်မည်ဟုတော့ မမျှော်လင့်သင့်ပေ..
(၁၀း၅၉ pm, 25-9-2011, Sunday)
at 8:58 AM Labels: စိတ်ထွက်ပေါက်
ပေးကား ပေးခဲ့ဖူးသည် လက်ခံခဲ့ဖူးပါသလား
သူပေးခဲ့ပေမဲ့ ကျမ မရခဲ့ပါ..
ဖြူစင်မှုတွေလို့ သူ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့အကြင်နာတွေ၊ ဂရုစိုက်မှုတွေနဲ့ သူ့ဘက်က သူ ပေးခဲ့ပါတယ်လို့ ပါးစပ်က ဖွင့်ပြောခဲ့တဲ့ မေတ္တာတရားတွေကို ဖြစ်သည်..
သူပေးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ လက်ခံခဲ့သူ ကျမကပဲ အဓိပ္ပါယ်ကောက် လွဲခဲ့သလား ..
ကျိန်းသေတာ တခုကတော့ ကျမက အတွေးခေါင်သူ… အသလွတ် မာနကြီးသူ.. နာကျင်လောက် အောင် ခံစားတတ်သူဖြစ်၍ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကို အသက်ရှုသလိုကို လိုချင်ခဲ့သူဖြစ်လေသည်..
ဒီလိုနဲ့ သူနဲ့ကျမတို့ လွဲချော်ခဲ့ကြလေသည်..
သူ ပေးခဲ့သည်က ဖြူစင်တဲ့ ကြင်နာမှုဖြစ်ပြီး ကျမ ရချင်ခဲ့သည်ကတော့ နှစ်လိုဖွယ်အတိပြီးတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားသပ်သပ်ကိုသာ ဖြစ်လေသည်..
ပိုင်ဆိုင်မှုသဘောတရားတွေကို ဆွေးနွေးဖြစ်သောအခါ ကျမက ပေးဆပ်မှုသပ်သပ်အချစ်ကို လေးစားပေမဲ့ ပိုင်ဆိုင်ရလိုမှုကို လိုချင်သူဖြစ်ခဲ့သည်.. သူကတော့ ပိုင်ဆိုင်ရလိုမှုဆိုသည်ထက် ပေးဆပ်မှုသပ်သပ်ကိုသာ ပေးအပ်ခဲ့သည့်သူဟု ဂုဏ်ယူတတ်သူသာ ဖြစ်ခဲ့သည်..
သူက ပေးခဲ့သည်လို့ ပြောခဲ့ပီး ကျမက မပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရလေသောအခါ ကျမတို့ ရိုးရိုးလေး ဝေးခဲ့ကြလေသည်..
ဆယ်စုနှစ် တစုစာ အချိန်အတော်ကြာကြာ ဝေးခဲ့ပြီးသောအခါ သူ့မှာ ပိုင်ဆိုင်မှုတော်တော်များများ ရှိနေခဲ့ပြီး ကျမကတော့ လက်မဲ့တယောက်သာ ဖြစ်နေဆဲဖြစ်လေသည်..
ကျမတို့ ဂဲသားရင်းတစ်ခုမှာ ပြန်ဆုံခဲ့လေသည်..
သူ့နံဘေးမှာ ချစ်စဖွယ်မိန်းခလေးတယောက် ရှိနေခဲ့ပြီး သူကတော့ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားတဲ့အပြုံးမျိုးနဲ့ ကျမကို ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့လေသည်..
ကျမကတော့ ကိုယ့်နှလုံးသားကို ကိုယ်ပိုက်ပြီး သူ့ရှေ့မှောက်မှာ ချိုသာတဲ့အပြုံးကိုသာ အရိုးသားဆုံး ပြုံးပြဖြစ်ခဲ့လေသည်..
သူ မေးခဲ့သလို ကျမ ဘာကြောင့် တကိုယ်ထီးတည်းဖြစ်နေခဲ့သလဲ စဉ်းစားကြည့်လေသည်..
ကျမက ရယူလိုခဲ့သည်ဆိုပေမဲ့ ရတိုင်း မယူခဲ့ဘဲ အလိုလိုဖြစ်တည်လာမယ့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာစစ်စစ်ကိုသာ အငမ်းမရရှာဖွေခဲ့သည့် သူသာ ဖြစ်ပြီး.. သူကတော့ ပေးဆပ်ခဲ့သည်လို့ပြောပြီး အလွယ်တကူရလာတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို အငမ်းမရ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည့်သူ ဖြစ်ခဲ့လေသည်..
အချိန်ကပဲ နှလုံးသားတွေကို ပြောင်းလဲသွားခဲ့စေသလား နှလုံးသားတွေကပဲ အချိန်ကာလအလိုက် ပြောင်းလဲသွားခဲ့တာလား .. မကျိန်းသေပါ..
ကျိန်းသေသည်ကတော့ ကျမနှင့်သူသည် အယူအဆချင်း ကွဲလွဲနေတုန်းပင်ဖြစ်လေသည်…
Saturday, September 10, 2011 (8း24 pm)
at 6:20 AM Labels: စိတ်ကူးတည့်ရာ
Tuesday, September 6, 2011 at 11:28am
at 10:12 PM Labels: ကဗျာ၊ စိတ်ထွက်ပေါက်
ဆူဝေနေတဲ့ ခေါင်းထဲက လုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊ အတွေးစတွေ၊ ရှုပ်ထွေးမှုတွေနှင့် လတ်တလော လုပ်ဆောင်ပေးရမည့် ကိစ္စရပ်များကို မေ့ပစ်ပြီး နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်သွားသည့်အချိန်သည် သာမန်အိပ်ချိန်ထက် အများကြီး စောသည့်အချိန်..
စူးစူးဝါးဝါးထိုးဟောင်လိုက်သည့် ခွေးအူသံများကြောင့် အလန့်တကြားနိုးထလာသည့်အချိန်သည် ည ၁း၃၀ အတိ..
မှောင်မည်းတိတ်ဆိတ်ကာ မီးမှိတ်ထားသည့်အခန်းအတွင်း ကျမရဲ့မွေ့ရာနံဘေးမှာ အမြဲတမ်း ထားထားသည့် လက်ကိုင်ဖုန်းက နာရီလက်တံတွေက ည ၁း၃၀ တိတိကို ညွှန်ပြနေခဲ့သည်..
အဲ့သည့် ခွေးအူသံ.. ကျမ ကြောက်လှသည့် အဲ့သည့် ခွေးအူသံသည် အချိန်တိတိကျကျရှိလှသည်..
အရင်နေ့တွေတုန်းကတော့ အဲ့ဒီခွေးအူသံသည် ကျမရဲ့နားနှစ်ဖက်ကို ပိတ်ထားတတ်သည့် နားကျပ်၂ဖက်ကြောင့် ကြားခွင့်ရပေမဲ့ မကြောက်တတ်လှ..
ဒီနေ့ကတော့ အလွန်အမင်းအိပ်မောကျနေသည်ဖြစ်သည့်အပြင် ကိုယ့်ခေါင်းရင်းနားက စွဲစွဲငင်ငင် အူလိုက်သံက ကိုယ့်ခြေရင်းမှာပင် ရပ်ကြည့်နေသလို.. အလင်းရောင်ဝိုးတဝါးအောက်က အရိပ်တချို့က စိတ်ကိုအရောင်ပြနေခဲ့..
ဟိုးလမ်းမတဖက်ထိပ်ဆီကနေ အူလာသည့်ခွေးတွေရဲ့အသံက ကြောက်လန့်တကြားနိုင်လှပြီး အဲ့သည့်အသံတွေက နေရာအပိုင်းလိုက် စဉ်လိုက်တစိုက် ကြားနေရပြီး ကျမတို့အိမ်ရှေ့က လမ်းမထိပ် တဖက်ကို ရောက်သွားသောအခါ အသံတွေက တိခနဲကို ပြတ်တောက်သွားခဲ့တော့သည်..
အဲ့သည့် အချိန်မှန်မှန် နေရာမှန်မှန် ကြားနေရသည့် ခွေးအူသံတွေကို စတင်သတိထားမိခဲ့တဲ့အချိန်က တော့ ၁၃ ရက်ကျသည့် သောကြာနေ့ တနေ့ပင်ဖြစ်သည်..
စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် အိမ်ရှေ့က ဝရံတာဝိုင်းလေးမှာ စကားဝိုင်းထိုင်ပြောနေကြသည့်အခိုက်ပေါ့.. ပထမတော့ နေကြာစေ့အထုပ်ကြီးကို အလယ်ချ.. ဂစ်တာတလက်ဆွဲကိုင်ထားသူက သံစဉ်တွေ ဆိုတီးနေပြီး ရောက်တတ်ရာရာ စကားပြောနေကြရင်းမှ.. နောက်တော့ တယောက်က ဘီယာဘူးတွေ သွားဝယ်လာခဲ့သည်.
ညက ထမင်းစားပြီး လက်ကျန် ကြက်သားဟင်းခွက်ကို သယ်ချလာပြီး ဝရန်တာ တံစက်မြိတ်အောက်က အိမ်ရှေ့မှာ စကားကောင်းနေလိုက်ကြတာ.. ည ၁၂ နာရီကျော်လို့ ၁ နာရီပင် ထိုးလုပြီ..
ကောင်းကင်မှာ ညက လအရောင်ကြောင့် ကြည်လင်နေပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်း မည်းမှောင်လာခဲ့တဲ့ အလင်းရောင်ကို သတိထားနေရင်းပင် တိမ်တအုပ်က အဲ့သည်လရောင်ကို ဖုံးအုပ်ဖို့ အကြံခံလိုက်ရတာပါပဲ..
အဲ့သည့်အချိန်မှာပဲ စွဲစွဲငင်ငင် စူးစူးရှရှအူလိုက်တဲ့ ခွေးတကောင်ရဲ့အသံကို မထိတ်သာမလန့်သာ စတင်ကြားလိုက်မိတော့တာ..
ကျမတို့ရဲ့စကားဝိုင်းမှာ အသံတိတ် ဂစ်တာသံဆိတ်သွားတော့သည်.. အဲ့သည့် ခွေးအူသံက လမ်းမ ဟိုဖက်ထိပ်ကနေ စကြားလာရတာဖြစ်ပြီး လမ်းတလျှောက် ခွေးတွေက ရောယောင်အူနေတော့တာ ဖြစ်သည်..
ကျမတို့ စကားဝိုင်းနားမှာ နေပြီး အကင်အစအနတွေ၊ ကြက်ရိုးတွေကို လာရောက်စားနေတဲ့ ခွေးကတော့ စောစောဏကတင် လမ်းမဆီ ပြေးထွက်သွားခဲ့ပြီ..
အဲ့သည့်ခွေးက လမ်းမ အလယ်ခေါင်တည့်တည့်မှာ ရပ်နေပြီး စူးစမ်းဟန်က အပြည့်ရှိနေခဲ့သည်. ပိုထူးခြားတာကတော့ သူ့ရဲ့အမြီးပဲဖြစ်သည်..
သူ့ရဲ့အမြီးက ပထမတော့ အပေါ်ကို ထောင်ထောင်မတ်မတ်ဖြစ်နေပြီး အစုလိုက်အပြုံလိုက် အူနေတဲ့ ခွေးအူသံတွေ တစထက် တစ နီးလာသောအခါ အဲ့သည့်အမြီးက ခွေလာပြီး နောက်တော့ အိန် အိန် ဆိုပြီး အမြီးကုပ်ကာ ကြောက်လန့်တကြား ထွက်ပြေးသွားတော့သည်..
ကျမတို့စကားဝိုင်းရဲ့ အရှေ့ အိမ်ခြံဝန်းသံပန်းတံခါး အရောက်မှာတော့ အဲ့သည့်အူနေတဲ့ အူသံတွေရော ခွေးတွေရဲ့အသံပါ ဓားနဲ့ဖြတ်ပိုင်းလိုက်သလိုပင် တိတိပပ ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့တော့သည်..
ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ ထူးခြားတဲ့အခြေအနေမှာ တကိုယ်လုံးကြက်သီးမွေးညှင်းတွေ တဖျင်းဖျင်း ထလာခဲ့ပြီး လူက စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ မကပ်ဖြစ်သွားတော့သည်.. မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ဟန်ရှိတဲ့ တယောက်ကြောင့် ဘီယာပုလင်းခွံကို တိုက်မိပီး ပြုတ်ကျသွားသည့် အသံသည် တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညမှာ ယောင်ယမ်း အော်ဟစ်လိုက်သံနှင့်တောင် တူနေတော့သည်..
နောက်တော့ ကျမတို့တွေ စကားဝိုင်းသိမ်းကာ အိမ်ထဲဝင်ခဲ့ကြတော့သည်.. အဲ့ဒီညက ဘယ်သူမှ ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်ကြပါ.
သံပန်းတံခါးရဲ့ပြင်ပဆီကနေ စူးစိုက်ကြည့်နေသည်လို့ သံသယရှိလှသည့် အထင်တလုံးနှင့် ကျမတို့တွေ နောက်ပိုင်းစကားဝိုင်းတွေကို အဲ့သည့်ဝရံတာလေးမှာ ထပ်မလုပ်ဖြစ်ကြတော့..
မှတ်မှတ်ရရ ရှိလှသည်ကတော့ အဲ့ဒီခွေးအူသံသည် ည ၁း၃၀ တိတိတွင် ကြားရခြင်းဖြစ်လေသည်..
မနေ့က ညသည် အိပ်မောကျနေရာက ရုတ်တရက်နိုးထလိုက်ရသည့်ညဖြစ်ပြီး ပြန်အိပ်ဖို့ကြိုးစားသော အခါ အိပ်မက်ဆိုးများနှင့် နပန်းလုံးရသော ညဖြစ်လေသည်..
ဒီနေ့ည ၁း၃၀ တွင်လည်း ဒီခွေးအူသံကို ကျမကြားရဦးမှာပင်ဖြစ်လေသည်..
(9း48 pm, 2/9/2011, Friday Night)
at 7:48 AM Labels: ခြောက်ခြားဖွယ်ရာ